Lacagta Digital-ka ee Bitcoin ayaa mar kale kor u kacday 19 kun oo Dollar muddo seddax sano… – Hagaag.com
Lacagta Digital-ka ee Bitcoin ayaa mar kale kor u kacday 19 kun oo Dollar muddo seddax sano…
Posted on 24 Nofeembar 2020 by Admin in Dhaqaalaha // 0 Comments
Bitcoin ayaa qiimaheeda mar kale kor u dhaafay $ 19,000 maanta oo Talaada ah, markii ugu horeysay muddo ku dhow seddex sano, waxayna ku dhowdahay inay gaarto heerkii ugu sareeyay ee ku dhowaad $ 20,000.
Dadka ku xeel dheer lacagaha digital-ka ah ayaa waxay u aaneeyaan sababaha kororka soo noqoshada xisaabta maalgashiyada halista sare leh, kana fog meelaha badbaadada leh sida dahabka, kaasi oo maanta gaaray heerkiisii ​​ugu hooseeyay 4 bilood gudahood.
Qiimaha halkii Bitcoin ayaa gaaray maanta oo Talaadada ah 19.167 oo dollar.
Lacagta digital-ka ee ugu caansan adduunka ayaa korodhay qiyaastii 160% sannadkan, oo lagu taageerayo baahida loo qabo hantida halista sare leh, iyada oo ay jiraan tallaabooyin dhaqaajin maaliyadeed oo aan horay loo arag, rajooyinka ayaa qaba in cryptocurrencies ay heli doonaan aqbalaad ballaaran.
Bitcoin ayaa kor u kacday 37% bishan November oo keliya, qiimaheedu ayaa hoos u dhacay 50% bilowgii cudurka Corona bartamihii bishii Maarso, laakiin waxay ku bilowday waji soo kabasho joogto leh.
Tirada lacagta Bitcoin ee dhex wareeganaysa suuqyada adduunka ayaa Talaadadii gaartay 18 milyan iyo 552 kun oo xabo oo ka mid ah 21 milyan oo wadarta guud ee xabo ee loo heli karo iibka iyo wareegga suuqyada.
Qiimaha suuqa ee tirada la kala iibsaday ilaa maanta wuxuu gaaray $351 bilyan, sida ku cad shaashadda lagu soo bandhigo ganacsiga meheradaha iibka lacagaha digital-ka ah.
Bitcoin ayaa waxay diiwaangelisay heerkeedii ugu sarreeyay oo taariikhi ah iyadoo qiimaheedu uu gaaray $19.7 kun halkii Bitcoin dhammaadkii 2017, ka dib markii ay billawday safar hoos u dhac ah waxayna gaartay $3,500 horaantii sanadkii hore.
Lacagta digital-ka ahi ma laha lambar taxane ah, mana ku hoos jiraan xakamaynta dawladaha iyo bangiyada dhexe sida lacagaha la yaqiinay ee lagu soo dhaqmayay, laakiin waxaa keliya lagula macaamilaa internetka iyada oo aan qof muuqda aan goob joog aheyn.